ချစ်ကြည်အေး: အဖေ-၃ (အပြီး)
Anonymous Sun Oct 17, 02:46:00 PM GMT+8
Ma Ma Chit Kyi
I cry after reading this post..
ကိုပေါ Sun Oct 17, 02:58:00 PM GMT+8
ကျနော့်အဖေဆုံးတုန်းက မငိုခဲ့ဘူး။ အဖေက ၈၀ ကျော်အထိ နေခဲ့ရတယ်။ လေလည်း ဖြတ်ထားတာဆိုတော့ ဒါမျိုးကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ပြီးသား ဖြစ်နေတာကိုး။
ဒါထက်... မချစ်ကြည်အေးအဖေက တော်တော်ချောတယ်ဗျ။
Sint Si Sun Oct 17, 03:27:00 PM GMT+8
သက်ဝေ Sun Oct 17, 03:29:00 PM GMT+8
ရင်ထဲမှာတော့ အပူမီးတွေနဲ့ လောက်မြိုက်နေပြီး
မျက်ရည်တွေလဲ ရပ်လို့မရအောင် ကျနေတယ်...
ကိုယ်တိုင် မကြုံရသေးပေမယ့် ဘဝမှာ အကြောက်ဆုံးလို့ ခေါ်ရမယ့် အဖြစ်အပျက်တခုပါပဲ...။
စုလတ် Sun Oct 17, 03:30:00 PM GMT+8
စု ရင်မဆိုင်ရဲဆုံးအရာဟာ စုဘဝရဲ့ သူရဲကောင်း၂ယောက်(ပါးနဲ့မား)ကို ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုပဲ ချစ်ချစ်ရယ်...
ဇွန်မိုးစက် Sun Oct 17, 03:33:00 PM GMT+8
အစ်မရေ... ခုမှ တပေါင်းတည်း လာဖတ်ဖြစ်တယ်။ အစ်မအဖေ စိတ်ချလက်ချ ထားသွားနိုင်လောက်အောင်ကို အစ်မက အစ်မကြီးပီသခဲ့တယ်ဆိုတာ ဇွန် သိနေတယ်။
ဒါနဲ့ အစ်မက အင်္ဂါသမီးကိုး။း)
rose of sharon Sun Oct 17, 03:43:00 PM GMT+8
သူငယ်ချင်းရေ... မျက်ရည်တွေကျမလာအောင် ကိုယ့်စိတ်ကိုထိန်းရင်း အပြီးအထိ ဖတ်သွားပါတယ်....
kay Sun Oct 17, 03:56:00 PM GMT+8
အေးအေးဆေးဆေး တွေးတွေးဆဆ ဖတ်သွား တယ်...မ...
ဘ၀ တွေ က.. ဘ၀ တွေနဲ့.. ပေါင်း..ဘ၀ တွေ ဖြစ်တည်.. ဘ၀ တွေ က..ခံစား..နာကျင်..
ချော Sun Oct 17, 03:59:00 PM GMT+8
ညီမမှာ အဖေရော အမေရော ရှိသေးတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ်နော်။
ဒါပေမဲ့လေ အဖေ၊အမေ မရှိတော့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးက အတွေးထဲမှာတောင် ပူလောင်မိတယ်.. ညအိပ်ချိန်များ တွေးမိရင် အိပ်ရာကတောင် ထထိုင်မိတယ်.
တစ်နေ့ ကြုံရမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ မကြုံချင်ဘူး။ အဲဒီနေ့ကို မရောက်ချင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိဘတွေထက် ကိုယ်က အရင် ခွဲခွာသွားချင်မိတယ်.. အစ်မအဖေ ဆုံးတဲ့အချိန် အစ်မရဲ့ခံစားချက်ကို နားလည် ခံစားမိပါတယ်..
blackroze Sun Oct 17, 04:12:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Sun Oct 17, 04:41:00 PM GMT+8
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဖတ်သွားရင်း ညီမ ဖေဖေ ပြောတဲ့ စကားလေး သတိရသွားတယ် အင်္ဂါသမီး ခွေးခြင်္သေမ လေ
ချစ်ကြည်အေး က ခြင်္သေ့ အစစ်ပါ
TURN-ON-IDEAS Sun Oct 17, 05:29:00 PM GMT+8
အစ်မချစ် ခံစားခဲ့ရတာတွေကို ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အပြည့် ခံစားလိုက်ရတယ်...
အိမ့်တာဝန်ကို လွဲပြောင်း(သို့)ခွဲဝေယူတတ်ကြတဲ့ (တာဝန်ယူတတ်တဲ့) အကြီးဆုံးတွေကို တန်ဖိုးထားတယ်၊ လေးစားတယ်...
(အငယ်ဆုံးပေမဲ့ တကယ်ကို နားလည်ခံစားပေးနိုင်ပါတယ်)
အထူးသဖြင့် မိန်းခလေးဖြစ်တဲ့ အစ်မချစ် အကြီးနေရာက တာဝန်ယူပေးခဲ့တာ လေးစားတယ်ဗျာ...
လုပ်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒကော၊ အရည်အချင်းကော ရှိမှသာ...
Anonymous Sun Oct 17, 05:37:00 PM GMT+8
ကျွန်မ စိတ်ရင်းက တော့ မိဘကကျွန်မထက်အရင် စောစီးစွာ လူ့လောကကို စွန်ခွာသွားတာမျိူးပဲဖြစ်စေချင်တယ်။ ကျွန်မ တို့သားသမီးတွေက အရင်စွန့်ခွာ သွားရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဒုတ်ခ ကို သူတို့ခံစားရမှာစိုးတယ်။ သေသွားတဲ့သူက ဘာမှမသိတော့ပါဘူး။ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ခံစားမှူက သေတာထက်ဆိုးတယ်လို့ထင်တယ်။ ကျွန်မ မိဘကိုချစ်လွန်းလို့ အဲဒီလို ခံစားမှူကို မပေးချင်ရက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး ကံကြမာ သဘောအတိုင်း သွားကြရတာပါပဲ ။ မြန်မာစာ ရိက်တာ မကျွမ်းကျင်ပါ။ :)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sun Oct 17, 07:31:00 PM GMT+8
အကိုကြီးလဲ ၅၀ ကျော်ပြီ..ဒီလိုပါပဲ သေသူကို ရှင်သူက တရင်း..ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာတာပါပဲ...
Anonymous Sun Oct 17, 08:11:00 PM GMT+8
ဖတ်ရင်းတွေး တွေးရင်းဖတ် ခြင်္သေ့မမအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
Ingjin Sun Oct 17, 08:41:00 PM GMT+8
အစ်မချစ် ဒီတစ်ခါတော့ ဂျင်းစုတ် တကယ်မျက်ရည်ဝဲပြီးဖတ်သွားတယ်။ ပုံစံသာကွဲမယ် လူတိုင်းတစ်နေ့မှာတော့ ကြံကိုကြုံကြရဦးမှာ။ :(
blackcoffee Sun Oct 17, 08:50:00 PM GMT+8
ဖတ်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ သေတနေ့ မွေးတနေ့ ဆိုတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ကျွန်တော်အစ်မဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ဆုံးသွားတုန်းကလဲ ကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ဒီလိုပဲတရားနဲ့ ဖြေရတာပေါ့ အစ်မရယ်။
ဖိုးတုတ် Sun Oct 17, 09:05:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေးရေ ကျွန်တော် အမရဲ့ အဖေအကြောင်းဖတ်ပြီး တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းပါဖူး ကျွန်တော်အဖေကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ (၇)နှစ်တုန်းက ဆုံးသွားတယ် အဲ့ဒီနေ.က သောကြာနေ. အလုပ်ကပြန်ပြီး အိမ်လည်းရောက်ရော တူမလေးဆီက ဖုံးလာတယ် အဖိုးဆုံးသွားပြီဆိုပြီး ပြောတယ် ၊ အခွန်ကလည်းမဆောင်ရသေး တနင်္ဂနွေနေ.မှာ အသုဘချမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်အခွန်မဆောင်ပဲ ရန်ကုန်ပြန်မလို. ဒါပေမဲ့ ခွင့်က သိပ်မရ အချိန်မှီရန်ကုန်က ပြန်ထွက်လို.မရင် မိန်းမရဲ့အလုပ်ပျက် ခလေးက ကျောင်းတန်းလန်းနဲ. နောက်ဆုံး ကျွန်တော်လည်း မပြန်ဖြစ်လိုက်ဖူး အမလိုပဲ အဖေကိုမတွေ.လိုက်ရဖူး ၊ အဖေရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကိုလည်း မပို.လိုက်ရဖူး ၊ တစ်ခါတစ်လေ အဖေကိုအိမ်မက်မက်တယ် ၊ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မက်ထဲမှာ ငိုရတာပေါ့ဗျာ ၊ စလုံးရောက်ပြီး ၄ နှစ် ရန်ကုန်ကိုမပြန်ဖြစ်ဖူး၊ အမေကမှ အဲ့ဒီ့ (၄)နှစ်အတွင်း စလုံးကိုလာလည်ဖူးတယ် ၊ အဖေကိုဆုံးတဲ့အထိမတွေ.လိုက်ရဖူး ၊ အထူးသဖြင့် နေမကောင်းဖျားနာတဲ့အချိန် ၊ စိတ်အားငယ်နေတဲ့အခါမျိးမှာ အဖေကို အိမ်မက်မက်တယ် သားလေးမွေးလို. ကိုယ်ကိုတိုင်က အဖေဘ၀ကိုရောက်လို. အဖေကိုအရမ်းလွမ်းနေတဲ့အချိန် အဖေဆုံးသွားပြီး မတွေ.လိုက်ရတဲ့ trauma ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် သေရာပါဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
အမရဲ့ အဖေက ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀မှာရှိနေမှာပါ .....
pandora Sun Oct 17, 11:36:00 PM GMT+8
ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ အဖေတွေ အမေတွေအားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်ကြပါစေ။
မြူးမြူး Mon Oct 18, 08:20:00 AM GMT+8
မမရေ.. မမအဖေအကြောင်းဖတ်ပြီး ကျွန်မဖေဖေကို အရမ်းသတိရသွားတယ်.. ဖေဖေကလဲ သင်္ဘောလိုက်တာပဲ.. ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ အသက်၄၀လောက်မှာ နားလိုက်ရတယ်.. အသက်၅၅နှစ်မှာ ဆုံးသွားတယ်လေ.. ကျွန်မလဲ ဖေဖေကို ကိုယ်တိုင်သင်္ဂြုလ်ခွင့် မရခဲ့ဘူး.. စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ကျွေးပြုစုခွင့်လဲ မရခဲ့ပါဘူး.. လာမယ့် ၂၈ရက်နေ့ဆို ဖေဖေဆုံးတာ ၂နှစ်ပြည့်ပြီ..
Thu Mon Oct 18, 09:34:00 AM GMT+8
Feel sad Ma Chit Kyi Aye! as one of the natural route and thanks for illustration the combined patterns of human character.
However, I realize most worry thing is parting of son/daughter before the parents.
As an experience of Grandmother Daw Su when she heard bad news of her eldest son U Ba Win and youngest son Bogyoke Aung san at same time. I felt too sad when reading and do much appreciate her stable mood among worst things.
သို့သော် အမေစုမှာ တကယ် အမှန်ဘဲလား ကွယ်…မလိုတဲ့သူတွေက လုပ်ကြံပြောတာလား… ပွဲချင်းပြီးရောလားကွယ့်.. ဟုမေးပြီး မျက်ရည်များ ၀ိုင်းလာရုံမှ အပ အခြားစိတ်ထိခိုက်မှုများကို မပြချေ။ “မှန်ရင်လဲ ဘ၀ကံအကြောင်းပေါ့ ကွယ်…” ဟု တခွန်းမျှပြောကာ တည်ငြိမ်ဆိတ်ငြိမ်စွာ နေပြီးနောက် အတော်ကြာ စကားမပြောဘဲ ရပ်ဆိုင်းနေလေသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်အား သားနှစ်ဦး၏ အလောင်းကို ကြည့်ရန် ရန်ကုန်အထိလိုက်ပို့ရန် ပြောသည်။
P.Ti Mon Oct 18, 09:48:00 AM GMT+8
အဖေတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြ၊ ဖြစ်ကြဆဲ၊ ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲလေ... ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်အမ။
ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်အချိန်ကြုံမယ်ဆိုတာ မသိသေးပါဘူး။ တနေ့နေ့တော့ကြုံရမှာပါ... ကြုံတဲ့အချိန် စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နောင်တကင်းကင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပြင်ဆင်ရဦးမှာ...
မိဘတွေ အသက်ရှိချိန် စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ရာ သတိပေးသလိုဖြစ်လို့ ဒီစာကို ရေးတဲ့အမကိုလည်း ကျေးဇူးလည်းတင်မိပါတယ်။
Cameron Mon Oct 18, 10:39:00 AM GMT+8
ညီမလေးလဲ အမချစ်လိုပဲ ဖေဖေဆုံးတုန်းက မျက်ရည်မကျခဲ့ဘူး...။ နှစ်တွေကြာလာတော့ ဖေဖေ့ကို အိပ်မက်မက်တိုင်း ငိုခဲ့ရတာများတယ်...။ လူတိုင်းအတွက် အဖေဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ အဲဒီစကားသိပ်ကိုမှန်ပါတယ်...။ ညီမလေးအဖေဆုံးတုန်းကဆိုရင် အသက် 39ပဲရှိသေးတာ...။
Moe Cho Thinn Mon Oct 18, 11:00:00 AM GMT+8
အခုလို ရုတ်တရက် ခွဲခွာသွားတဲ့အခါ သွားရတဲ့သူကတော့ ဘာဆို ဘာမှကို မခံစားလိုက်ရလို့ ကံကောင်းတယ် ပြောရမှာပေါ့။
ကျန်နေခဲ့ရတဲ့သူကတော့ သိသိချင်းမှာလဲ ဖြေမဆည်နိုင်၊ ကြာလေလေ လဲ တမြေ့မြေ့ ခံစားရလေလေပါပဲ မမရယ်..။ မမ ခံစားမှုကို နားလည် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
ချိုသင်းတို့ မိသားစုထဲမှာလဲ၊ အမေ၊ မောင်လေး၊ အဖေ ၃ယောက်စလုံး ရုတ်တရက် ဖြစ်သွားကြသူချည်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် မိသားစုတွေ ထပ်ခွဲခွာရမှာ ကြောက်လွန်းလို့ ..။ တရား မရှိဘူး ဆိုရမှာပါပဲ။ ကိုယ်က အဝေးမှာ နေတဲ့သူဆိုတော့ ရပ်ဝေးက ဖုန်းလာရင်တောင် လန့်နေမိတာပါ။
သဒ္ဓါလှိုင်း Mon Oct 18, 01:17:00 PM GMT+8
ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်ဖြစ်အောင် ခံစားရပါတယ်..။
Unknown Mon Oct 18, 01:40:00 PM GMT+8
susu Mon Oct 18, 02:08:00 PM GMT+8
မချစ်...ဖတ်ရတာရင်ထဲဆို့နင့်သွားတာဘဲ...ကျမမိဘ‌တွေလဲ ၆၀ ‌ကျော်
ကလဲလာ‌နေဖို့‌ခေါ်တာမရဘူး..တိုက်ခန်းနဲ့‌နေရတာအသက်ရှုကျပ်တယ်
ဝမ်းနည်းမှု‌တွေနဲ့‌ရှေ့ ဆက်‌လျှောက်ရဦးးမှာ‌ပေါ့‌လေ..။
Rita Mon Oct 18, 03:58:00 PM GMT+8
ဒီ post ကို မဖတ်လိုက်မိရင် ကောင်းမှာလို့ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိတယ်။
tinhtoo Mon Oct 18, 05:29:00 PM GMT+8
ဘ ဝ တူ အ ကို ကြီး တ ယောက် အ ကြောင်း စိတ် မ ကောင်း စွာ ဖတ် ရ လို့ ပို ပြီး ခံ စား ရ ပါ တယ် ။ သင်္ဘောသားတယောက် ရဲ့ ဘဝ သင်္ဘောသား ဖြစ် ဘူး မှ ဘဲ နား လည် နိုင် မှာ ပါ ။ အ ငှား ခံ စား လို့ မ ရ ပါ ။ ကျ နော့် သင်္ဘောသား မှတ် ပုံ တင် နံ ပါ တ် CDC no. ၈၇၉၅ ပါ။ လေး စား စွာ ဖြင့် တင် ထူး
အုပ်ကြီး Mon Oct 18, 10:25:00 PM GMT+8
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖေတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြ၊ ဖြစ်ကြဆဲ၊ ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲလေ...
Crystal Mon Oct 18, 11:05:00 PM GMT+8
ခံစားချက်ချင်း ကြိုးညှိလို့ရတယ်အစ်မရေ၊ ညီမအဖေဆုံးသွားတုန်းက ညီမအသက်(၁၃)ပဲရှိသေးတယ်။ ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ... :(
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Tue Oct 19, 05:52:00 AM GMT+8
အဖေအကြောင်းရေးနေရင်းနဲ့သူ့ ချစ်ချစ်ကြီးအကြောင်းကို ဆရာကတော်ကကြော်ငြာဝင်သွား
Vista Tue Oct 19, 12:34:00 PM GMT+8
ဖတ်ပီး ငိုချင်တာနဲ့ မမန့် ဖြစ်ဘူး ဒီနေ့ ထပ်ပြန်လာဖတ်ရင်းမှ မန့် လို့ ရတယ် ..ငိုတာတော့ငိုချင်တုန်းပဲ ။
မြသွေးနီ Thu Oct 21, 08:02:00 PM GMT+8
စာနာစိတ်နဲ့ဖတ်ရင်းမျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်။ အမေ့ကိုလည်း လွမ်းမိတယ်။
အမေမရှိတော့ အဖေ့ကိုတိုးလို့ ပြုစုနေရတယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိဘတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် သူရဲကောင်းတွေ၊ မှတ်ကျောက်တွေ၊ စံပြတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြ၊ ဖြစ်ကြဆဲ၊ ဖြစ်နေကြဦးမှာပါပဲလေ...။
Anonymous Sat Oct 23, 11:14:00 PM GMT+8
စုချစ် Mon Oct 25, 01:02:00 PM GMT+8
အမချစ်ကြည်.... ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းလို့ စဖတ်ပြီးခါစက ကော်မန့် ရေးမသွားခဲ့ဘူး။ အခုမှ တခါ လာရေးတာ...